Akhriso: Maqaal uu qoray Madaxweynihii hore Xasan Sheekh (Soomaaliyey I Maqal) - iftineducation.com
Akhriso: Maqaal uu qoray Madaxweynihii hore Xasan Sheekh (Soomaaliyey I Maqal)
iftineducation.com – Maqaalkan ayuu Madaxweynihii hore kaga hadlayaa sooyaalka taariikhda dhow ee dowladda dhisida Soomaaliya, mudadii bur burka iyo caqabadihii jiray, iyo talooyin uu jeedinayo.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul-wasaaraha waqti intaas ka badan uma heli karin la tashiga noocaan ahna ma laha meel uu ku dhammaado laakin hadba intuu waqtiga kuu saamaxayo ayaa la sammeeyaa.
Dhismaha Xukuumadda halka halbeeg siyaasadeed ee ay leedahay waa iney dhammaan qabaa’ilku Soomaaliyeed ka kooban tahay iyadoo la tixgelinayo halbeegyo kale oo dhinacyada farsamada la xiriiro.
In laga fogaado shaqsiyaad bulshada dhexdeeda ceebo la taaban karo ku leh si dadku aaney uga gowsqabsan aqbalaaddooda, madaxduna aaney ugu mashquulin difaaciddooda iyo u qiil dayidooda.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul-wasaaraha iney sammeystaan habeegyo ay ku cabbiraan shaqsiga ay golaha ku soo darayaan
In la dhowro shurrudaha ku cad dastuurka ee xubinta ka mid noqoneysa xukuumadda intii suurtagal ah
Xukuumad kasta oo la dhiso waxay ka koobantaa qofaf aad adiga heyb wadaagtaan intii aad doontaan isku jira e, sidaas daraadeed waxaa habboon inaad oggolaato fursadda walaalkaa / walaashaa kugu Beesha ah. Ogow haddii aad diido in lagu hoggaamiyo adiguna wax ma hoggaami kareysid BARRI – waaba haddii BARRI ay ku qoran tahay qaamuuskaaga – Galliimi doonow galliin ha diidin.
Ku dhawaad LIX bilood ayaan ku soo jirnay doorasho, ku dhawaad LABA biloodne waxaa lagu mashquulsanaa xukuumad dhisid. Intee in la eg oo waqti ah ayaa dalku ku sugnaa karaa xaladdaas xukuumad la’aanta ah annagoo og in dowladnimadeenna ay wali NUGUSHAHAY oo aaney noo xoogganeyn hab-maamul dowladeedkeenna (Bureaucracy).
Haddii xukumadda maanta la dhisay la diido yaa noo ballan qaadayo tan ku xigta iney la oggolaanayo. Sow ma habboona inaan fursad siinno oo la ansaxiyo oo markaa ka dib haddii ay gudan weydo waajibaadkii loo igmaday aan wax ka baddal soo jeedinno annagoo raaceyna nidaamka noo deggan ee horay loogu heshiiyay.
Ma dareensan tahay in inta aan ku mashquulsannahay xukuumad dhisidda, Soomaaliya ay wax badan uga hallabayaan xukuumad la’aanta. Meeqa isku day daneysi ajnabi iyo shaqsiyaad Soomaali ah ay wadaan ayaa socda oo la doonayo in dalka ama qeybo ka mid ah la TAFAARIIQ gadeeyo iyadoo laga faa’ideysanayo mashquulka madaxda iyo xukuumad la’aanta dalka ka jirta.
Xaaladda jirta awgeed, meeqa shir oo arrimaha Soomaaliya looga tashanayo ayaa dhacay ama ballansan. Go’aannada shirarkaas qaarkood Soomaaliya waa ku qasban tahay iney u hoggaansato iyadoo aan talo ku lahayn markii la gaarayay.